News 18 Nepal || विजयादशमीका विभिन्न साइत सार्वजनिक, कति बजे लगाउँदा उत्तम ?
विजयादशमीका विभिन्न साइत सार्वजनिक, कति बजे लगाउँदा उत्तम ?
काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले वि.सं. २०७७ को विजयादशमी लगायत दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । वि.सं. २०७७ कात्तिक १ गते शनिबारदेखि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ शुरु हुँदैछ ।
कात्तिक २ गते आइतबार बिहान १०ः५३ बजे पश्चिम फर्केर झण्डा फेर्ने साइत दिइएको छ । विशेषगरी नेपाली सेनाले झण्डा फेर्ने गरेको जनाइएको छ । कात्तिक ५ गते बुधबार पचली भैरव यात्राको साइत जुरेको छ । कात्तिक ७ गते शुक्रबार फूलपाती छ । फूलपाती भित्र्याउन साइत आवश्यक पर्दैन ।
विशेष गरी बेलुकी नवदुर्गा स्थापना गरी घटस्थापना गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैँ घरमा फूलपाती भित्र्याइन्छ । कात्तिक ७ गते शुक्रबार फूलपातीकै दिन बिहान ८:५६ बजे तुलजा भवानीको यात्रा चलाउने साइत छ । यात्रा सकेर बिहान १०:१४ बजे तुलजा भवानीलाई स्थिर आसनमा राख्ने साइत निस्किएको समितिले जनाएको छ ।
देशका धेरै स्थानमा विजयादशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म मान्यजनबाट टीकासहित आशीर्वाद लिइने परम्परा छ । टीकाकै दिन बिहान ८:४७ बजे तुलजा भवानीको यात्रा गराउने साइत जुरेको छ । तुलजा भवानीलाई स्थिर आसनमा राख्ने साइत भने बिहान ९:४९ बजेको छ । खड्गयात्रासमेत यसैदिन गरिन्छ ।
रामायण र महाभारत दुबै कालमा थिए यी ५ महापुरुष !
आज महाअष्टमीमा महागौरीको आराधना गरिँदै, यस्ता छन् फाइदा
आज महाअष्टमी, शक्तिपिठमा विधि पुर्‍याउन मात्रै बलि दिइने
निधारमा किन लगाइन्छ टीका ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण